Sabal Palm - Umthi ozithandayo waseMzantsi Carolina neFlorida
I-Sabal Palmetto Palm, Indawo yokuHlala yaseMzantsi
iklabishi yesundu, palmetto, palm palm. Ifoto nguSteve Nix
Amagqabha kaSabal okanye uSabal palmetto , obizwa ngokuba yiklabishi kunye nesundu le-palmetto zintlanzi kunye namagqabantshintshe. Isihlahla somthi we-palmetto sikhula ngakumbi njengotshani kunomthi womthi oqhelekileyo. Iifabhethi zeklabishi ayinayo iikhonkco zonyaka kodwa zikhula ngamagqabi amaqabunga phezulu kunyaka ngamnye. Amagqabi amade anemizila eqondekileyo yemifuno efana.
Ukwazi ukufikelela kwii-90 okanye ngaphezulu kwiindawo ezikuthiwa (xa zivuliwe okanye zikhuselekile ngemithi ejikelezile) I-Sabal palmetto idla ngokubonakala kwi-40 ukuya kuma-50 ubude. Isundu sisimangalo esiqinileyo esinqabileyo esinomthi onamaqabunga, onobumba obunobunzima obunzima, obusuka ngqo, obunqamlekileyo, obunqambileyo okanye obunqamlekileyo.
I-Palmetto ngokwenene ligama elivela kwiSpanish elithi palmetto okanye isundu esincinane. Kwakungenakuchazwa ngokuba umthi udlalwa njengomthi omncinci kwi-understory.
Umzekelo omkhulu weSabal palmetto ukhula kwiindawo zeDrayton Hall kufuphi neCharsteston, eSouth Carolina kwaye ukhonkxa unxweme olusezantsi eAtlantic edlulileyo eMami, eFlorida.
Drayton Hall, eSouth Carolina
Iklabishi yePalm - Umthi wesizwe kwaye uyabaluleka kwi-Landscape
I-Flag of South Carolina State Flag. South Carolina Tourism
USabal palmetto ubizwa ngokuba ngu- SAY-bull pahl -MET-oh . Isundu leklabishi yiNingizimu Carolina kunye nomthi wesizwe saseFlorida. Isundu seklabishi kwiflegi yaseSouth Carolina naseFlorida iSidyuli esikhulu. Igama eliqhelekileyo elithi "iklabishi yesundu" livela kwisitya esasidliwayo, intloko yesandla "esentliziyweni" esine-flavour-like flavour. Ukuvuna intliziyo yesundu akucetyiswa kwiindawo ezixabisekileyo njengoko kungonakalisi kwimpilo yesundu kunye nefom.
Esi sundu sikulungele ukusetyenziswa njengendlela yokutyala esitratweni , ukucwangcisa umthi, kuboniswe njenge-specimen, okanye kuhlanganiswe kumaqela angacwangciswanga of size size. Isundu seklabishi ilungele iindawo zokuhlala elwandle. Iimitha ezine ukuya ezintlanu-ubude, ezimhlophe ezimhlophe, iintyatyambo zeentyatyambo ezibonakalayo ehlotyeni zilandelwa yincinci, ekhanyayo, eluhlaza ukuya kwizityalo ezimnyama ezigqitywa yi-squirrels, i-raccoons kunye nezinye izilwanyana zasendle. Akukho zikhonkco.
Iintetho Zemihlaba yaseUnited States
Iklabishi Palmetto njengesityalo seNdlela kunye neendawo
Sabal Palmettos kwiSitalato saseCharleston. Ifoto nguSteve Nix
Iklabishi Palm ithetha njengesiqhwithi somthi njengomthi. Bema emva kweemvunguvungu ezininzi ziye zavuthela kwiimithi ze-oki zaza zahlutha iipinili ezimbini. Zilungelelanisa kakuhle kwiinqununu ezincinci, kwaye ziyakwazi ukudala umthunzi xa zityalwe kumaziko angama-6 ukuya ku-10.
Izindwangu ezitsha zitshintshi zifuna inkxaso ngenkxaso yesikhashana xa ithe yafuduka emva kokukhula. Izindwangu ezitshintshwe ngokuqhelekileyo ezinamapulangwe amakhulu ezintathu ziphakanyiswe izakhiwo zebhodi ze-tripod de kubekwa inkqubo yenkxaso yenkxaso. Ukucoca i-trunk yamasebe ezinqabileyo kubalulekile kwifom e nqwenela kunye nokuphelisa indawo yokuhlala kwiindawo zokuhlala.
Ukutshala okutsha kwimiba kubonakala njengengqayi yezibonda ezisetyenziswayo kude. Ukuba ezi "zibonda" zilawulwa kakuhle kwaye zixiliswa kakuhle ziza kuvelisa iingcambu ezintsha kunye namaqabunga kwiinyanga ezimbalwa. Njengoko kubonisiwe, imithi emitsha kufuneka iqhutywe okanye ixhaswe ngenye indlela ide ibekwe - ikakhulukazi kwiimeko ezinxweme ezisemaphandleni.
Isingeniso kuSabal Palmetto
I-Sabal Palms ziThyst and Well Transplant
I-Sabal Palms kufuphi neCallieston yeCawa. Ifoto nguSteve Nix
Iiklabishi zezandla zeklabhi ziyingozi kunazo zonke kwihlabathi elitsha kwaye zenza kakuhle kwihlabathi ezininzi. Isundu sisenza kakuhle kakhulu kwi-South West yangaphakathi kunye kunye ne-Southwest Coast Coast apho zityalwa khona kwindawo yasePhoenix, eLas Vegas naseSan Diego. Ngokuqinisekileyo abayithandanga nje kwimzantsi e-United States.
I-Sabal palm isetyuwa kakhulu kunye nokomelela kwemvula kwaye isetyenziswe rhoqo kwiindawo zokuhlalisa i-beachside kunye nezitalato zedolophu. Iifabhi zezitshalo zilula ukutshala kwaye, intengiso ye palmetto ibanjwe kwintlango xa kukho, ubuncinane, iinyawo ezintandathu zeenyawo kunye nawo onke amaqabunga anqunywe kwi-trunk.
Iintendelezo ezincinci zitshintshelwe zisuka kwintsimi zibe ziibhobho ezinkulu, zithatyathwa kwiifama apho imeko yendalo yilawulwa khona ukuba kubekho izinga lokusinda kangcono. Iinkqubo ezineenkomfa ezinzulu kunye neengqungquthela ezipheleleyo zingatshintshwa kunye nokucocwa kweengcambu ezicwangcisiweyo ezinyangeni ezi-4-6 ngaphambi kokumbumba kunokwandisa ukunyuka kokutshintshwa kwintendelezo kunye nokukhuthaza ukuphakama kwamathambo. Iintlanzi zeSabal kufuneka zihlale zitshintshwe ngendlela efanayo njengoko zazikhulile.
Ukuhlukahluka okungafaniyo Kuphucula ukukhethwa kweSabal
I-Cabbage Palm kwi-Charleston Landscape. Ifoto nguSteve Nix
Kukho iintlobo ezininzi zeSabal Palm. USabal peregrina , otyalwe kwi-Key West, ukhula ukuya kuma-25 ukuya phezulu. I-Sabal encinci , inzala yasePaletto yaseMzaleni, idala i-exotic, ngokuqhelekileyo i-strless shrub, ezine iinyawo eziphakamileyo kunye nobubanzi. I-Older Dwarf Palmettos yakha iinqwelo eziziikubhite ezintandathu ubude. USabal mexicana ukhula eTexas kwaye ukhangeleka njengoSabal palmetto .
Uhlobo olutsha lweSabal palmetto lufunyenwe eMzantsi West Florida kwaye luthiwa nguSabal palmetto 'uLisa'. 'I-palmetto' kaLisa inomhlathi oqhelekileyo owenziwe ngamabala kodwa ngeempawu eziphakamisa ifomu yesundu kunye nokuthanda kwilizwe kunye naselwandle. Ukuba nje ngokuqinileyo kubanda, ityuwa, isomiso, umlilo nomoya njengoluhlobo lwendalo lwendalo, uLisa "unomthandayo.
Ukuchonga iMithi yaseNorth American Coniferous With Needles
Indlela yokuchonga iMigodi yaseMntla yaseMntla American Birch
Baldcypress - Umthi Wemizi Yonyaka
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: i-chrom- or chromo-
Ukhetho lukaMongameli kunye noQoqosho
Iingqinisiso zesiLwimi zesiLatin: 'Spedire'